How Pi Works - do Pi
मेनु	बन्द गर्नुहोस्
Pi सेट गर्नुहोस्
Pi प्राप्त गर्नुहोस्
Pi कसरी काम गर्दछ
सेतो कागज ++
कसरी Pi काम गर्दछ
Pi सेतो कागज
समस्या: 1st Gen Cryptocurrencies को पहुँच
समाधान: Pi - Mining Goes Mobile
Pi आर्थिक मोडेल: अभाव र पहुँच सन्तुलन
उपयोगिता: p2p मा अप्रयुक्त स्रोतहरू मुद्रीकरण
शासन - जनताको लागि र मुद्रा
रोडम्याप / तैनाती योजना
संसार बढ्दो रूपमा डिजिटल हुँदै जाँदा, क्रिप्टोकरेन्सी पैसाको विकासको अर्को प्राकृतिक चरण हो। Pi दैनिक मानिसहरूका लागि पहिलो डिजिटल मुद्रा हो, जसले विश्वव्यापी रूपमा क्रिप्टोकरन्सीलाई अपनाउने क्रममा अगाडि बढ्ने एक प्रमुख कदमलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।
हाम्रो मिशन: दैनिक मानिसहरु द्वारा सुरक्षित र संचालित क्रिप्टोकरेन्सी र स्मार्ट अनुबंध प्लेटफर्म निर्माण गर्नुहोस्।
हाम्रो भिजन: विश्वको सबैभन्दा समावेशी पियर-टु-पियर मार्केटप्लेस निर्माण गर्नुहोस्, विश्वको सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने क्रिप्टोकरेन्सी, Pi द्वारा इन्धन।
थप उन्नत पाठकहरूका लागि अस्वीकरण: Pi को लक्ष्य सम्भव भएसम्म समावेशी हुनु भएकोले, हामी हाम्रा ब्लकचेन नवजातिकाहरूलाई खरगोशको प्वालमा परिचय गराउन यो अवसर लिन जाँदैछौं 🙂
परिचय: किन क्रिप्टोकरन्सीहरू महत्त्वपूर्ण छन्
हाल, हाम्रो दैनिक वित्तीय लेनदेनहरू लेनदेनको रेकर्ड कायम राख्न विश्वसनीय तेस्रो पक्षमा निर्भर छन्। उदाहरणका लागि, तपाईंले बैंक कारोबार गर्दा, बैंकिङ प्रणालीले रेकर्ड राख्छ र कारोबार सुरक्षित र भरपर्दो छ भनी ग्यारेन्टी दिन्छ। त्यस्तै गरी, जब सिन्डीले PayPal प्रयोग गरेर स्टिभलाई $5 स्थानान्तरण गर्छ, PayPal ले सिन्डीको खाताबाट डेबिट गरिएको $5 र स्टिभको खातामा $5 जम्मा भएको केन्द्रीय रेकर्ड राख्छ। बैंक, PayPal, र वर्तमान आर्थिक प्रणालीका अन्य सदस्यहरू जस्तै मध्यस्थकर्ताहरूले विश्वको वित्तीय लेनदेनलाई नियमन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।
यद्यपि, यी विश्वसनीय मध्यस्थहरूको भूमिकामा पनि सीमितताहरू छन्:
अनुचित मूल्य कब्जा। यी बिचौलियाहरूले सम्पत्ति सृजनामा ​​अरबौं डलर जम्मा गर्छन् (PayPal बजार क्याप ~$130B), तर तिनीहरूमा वस्तुतः केही पनि जाँदैन।ग्राहकहरु– जमिनमा बस्ने दैनिक मानिस, जसको पैसाले विश्व अर्थतन्त्रको अर्थपूर्ण अनुपात चलाउँछ। धेरै भन्दा धेरै मानिसहरू पछि पर्दै छन्।
शुल्क। बैंक तथा कम्पनीहरूले लेनदेन सहज बनाउन ठूलो शुल्क लिने गरेका छन् । यी शुल्कहरूले प्रायः कम आय भएका आबादीहरूलाई असमानताले असर गर्छ जससँग थोरै विकल्पहरू छन्।
सेन्सरशिप। यदि कुनै विशेष विश्वसनीय मध्यस्थले निर्णय गर्छ कि तपाईंले आफ्नो पैसा सार्न सक्षम हुनुहुन्न भने, यसले तपाईंको पैसाको आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ।
अनुमति दिइयो। विश्वसनीय मध्यस्थले द्वारपालको रूपमा सेवा गर्दछ जसले मनमानी रूपमा कसैलाई नेटवर्कको हिस्सा हुनबाट रोक्न सक्छ।
छद्मनाम। एक समयमा जब गोपनीयताको मुद्दा अधिक जरुरी छ, यी शक्तिशाली द्वारपालहरूले गल्तिले खुलासा गर्न सक्छन् - वा तपाइँलाई खुलासा गर्न जबरजस्ती - तपाइँले चाहेको भन्दा बढी आफ्नो बारेमा वित्तीय जानकारी।
Bitcoin को "पियर-टू-पीयर इलेक्ट्रोनिक नगद प्रणाली," एक बेनामी प्रोग्रामर (वा समूह) सातोशी नाकामोटो द्वारा 2009 मा सुरु गरियो, पैसाको स्वतन्त्रताको लागि एक वाटरशेड क्षण थियो। इतिहासमा पहिलो पटक, मानिसहरूले तेस्रो पक्ष वा विश्वसनीय मध्यस्थको आवश्यकता बिना नै सुरक्षित रूपमा मूल्य आदानप्रदान गर्न सक्छन्। Bitcoin मा भुक्तान गर्नुको अर्थ स्टीव र सिन्डी जस्ता व्यक्तिहरूले संस्थागत शुल्कहरू, अवरोधहरू र घुसपैठहरूलाई बेवास्ता गर्दै एक अर्कालाई प्रत्यक्ष रूपमा तिर्न सक्थे। Bitcoin साँच्चै सीमा बिना मुद्रा थियो, शक्ति र एक नयाँ वैश्विक अर्थव्यवस्था जडान।
वितरित लेजरहरूको परिचय
Bitcoin को प्रयोग गरेर यो ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्योएक वितरितरेकर्ड। हालको वित्तीय प्रणाली सत्यको परम्परागत केन्द्रीय अभिलेखमा निर्भर रहँदा, बिटकोइन रेकर्डलाई "मान्यताकर्ताहरू" को वितरित समुदायद्वारा राखिन्छ, जसले यस सार्वजनिक खातामा पहुँच र अद्यावधिक गर्दछ। Bitcoin प्रोटोकललाई विश्वव्यापी रूपमा साझा गरिएको "Google पाना" को रूपमा कल्पना गर्नुहोस् जुन लेनदेनको रेकर्ड समावेश गर्दछ, यो वितरित समुदायद्वारा मान्य र मर्मत गरिएको छ।
Bitcoin (र सामान्य ब्लकचेन टेक्नोलोजी) को सफलता यो हो कि, रेकर्ड समुदाय द्वारा राखिएको भए तापनि, प्रविधिले तिनीहरूलाई सधैँ सत्य लेनदेनहरूमा सहमतिमा पुग्न सक्षम बनाउँछ, ठगीहरूले झूटा लेनदेनहरू रेकर्ड गर्न वा प्रणालीलाई ओभरटेक गर्न सक्दैनन्। यस प्राविधिक विकासले लेनदेन वित्तीय सुरक्षामा सम्झौता नगरी केन्द्रीकृत मध्यस्थकर्तालाई हटाउन अनुमति दिन्छ।
वितरण गरिएका खाताहरूका फाइदाहरू
विकेन्द्रीकरण, बिटक्वाइन, वा सामान्य रूपमा क्रिप्टोकरेन्सीहरूका अतिरिक्त, केही राम्रा गुणहरू साझेदारी गर्नुहोस् जसले पैसालाई चलाख र सुरक्षित बनाउँदछ, यद्यपि विभिन्न क्रिप्टोकरेन्सीहरू तिनीहरूको प्रोटोकलहरूको विभिन्न कार्यान्वयनको आधारमा केही गुणहरूमा बलियो र अरूमा कमजोर हुन सक्छन्। क्रिप्टोकरेन्सीहरू सार्वजनिक रूपमा पहुँचयोग्य ठेगानाद्वारा पहिचान गरिएको क्रिप्टोग्राफिक वालेटहरूमा राखिन्छन्, र निजी कुञ्जी भनिने एक धेरै बलियो निजी रूपमा राखिएको पासवर्डद्वारा सुरक्षित गरिन्छ। यो निजी कुञ्जीले क्रिप्टोग्राफिक रूपमा लेनदेनमा हस्ताक्षर गर्छ र जालसाजी हस्ताक्षरहरू सिर्जना गर्न असम्भव छ। यो प्रदान गर्दछसुरक्षारअयोग्यता। सरकारी अधिकारीहरूले जफत गर्न सक्ने परम्परागत बैंक खाताहरू भन्दा फरक, तपाईंको वालेटमा रहेको क्रिप्टोकरेन्सी तपाईंको निजी कुञ्जी बिना कसैले पनि खोस्न सक्दैन। क्रिप्टोकरन्सीहरू हुन्सेन्सरशिप प्रतिरोधीविकेन्द्रीकृत प्रकृतिको कारणले गर्दा जो कोहीले नेटवर्कमा कुनै पनि कम्प्युटरमा रेकर्ड र प्रमाणीकरण गर्न लेनदेन पेश गर्न सक्छ। क्रिप्टोकरेन्सी लेनदेन होअपरिवर्तनीयकिनकी प्रत्येक लेनदेनको ब्लकले पहिलेका सबै ब्लकहरूको क्रिप्टोग्राफिक प्रमाण (ह्यास) को प्रतिनिधित्व गर्दछ। एकपटक कसैले तपाईंलाई पैसा पठाएपछि, तिनीहरूले तपाईंलाई आफ्नो भुक्तानी चोर्न सक्दैनन् (अर्थात्, ब्लकचेनमा कुनै बाउन्सिङ चेकहरू छैनन्)। केही क्रिप्टोकरेन्सीहरूले पनि समर्थन गर्न सक्छन्आणविक लेनदेन।यी क्रिप्टोकरन्सीहरूमा निर्मित "स्मार्ट अनुबंधहरू" प्रवर्तनको लागि कानूनमा मात्र भर पर्दैन, तर सार्वजनिक रूपमा लेखा योग्य कोड मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा लागू हुन्छ, जसले तिनीहरूलाई बनाउँछ।विश्वासहीनर सम्भावित रूपमा धेरै व्यवसायहरूमा बिचौलियाबाट छुटकारा पाउन सक्छ, जस्तै घर जग्गाको लागि एस्क्रो।
वितरित खाताहरू सुरक्षित गर्दै (खनन)
लेनदेनको वितरित रेकर्ड कायम राख्ने चुनौतीहरू मध्ये एक सुरक्षा हो - विशेष गरी, कसरी धोखाधडी गतिविधिलाई रोक्न खुला र सम्पादन योग्य खाता राख्ने। यस चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न, Bitcoin ले लेनदेनको साझा रेकर्डमा अद्यावधिक गर्न "विश्वसनीय" को हो भनेर निर्धारण गर्न माइनिङ (सहमति एल्गोरिदम "कार्यको प्रमाण" प्रयोग गरेर) नामक उपन्यास प्रक्रिया प्रस्तुत गर्‍यो।
तपाईले खननलाई आर्थिक खेलको एक प्रकारको रूपमा सोच्न सक्नुहुन्छ जसले रेकर्डमा लेनदेनहरू थप्ने प्रयास गर्दा "मान्यताकर्ताहरू" लाई उनीहरूको योग्यता प्रमाणित गर्न बाध्य पार्छ। योग्य हुन, मान्यकर्ताहरूले जटिल कम्प्युटेशनल पजलहरूको श्रृंखला समाधान गर्नुपर्छ। पहिले पजल हल गर्ने मान्यकर्तालाई लेनदेनको पछिल्लो ब्लक पोस्ट गर्न अनुमति दिएर पुरस्कृत गरिन्छ। लेनदेनको नवीनतम ब्लक पोस्ट गर्दा मान्यकर्ताहरूलाई ब्लक इनाम "मेरो" गर्न अनुमति दिन्छ - हाल १२.५ बिटकोइन (वा लेख्ने समयमा ~$40,000)।
यो प्रक्रिया धेरै सुरक्षित छ, तर यसले धेरै कम्प्युटिङ पावर र ऊर्जा खपतको माग गर्दछ किनभने प्रयोगकर्ताहरूले अनिवार्य रूपमा "बर्न मनी" कम्प्युटेशनल पजल समाधान गर्नका लागि तिनीहरूलाई थप Bitcoin कमाउँछ। बर्न-टू-रिवार्ड अनुपात यति दण्डात्मक छ कि यो Bitcoin रेकर्डमा इमानदार लेनदेन पोस्ट गर्न सधैं मान्यकर्ताहरूको स्वार्थमा हुन्छ।
समस्या: शक्ति र पैसाको केन्द्रीकरणले पहिलो पुस्ताको क्रिप्टोकरेन्सीहरूलाई पहुँचबाट टाढा राख्छ
Bitcoin को प्रारम्भिक दिनहरूमा, जब केवल थोरै मानिसहरू लेनदेन प्रमाणित गर्न र पहिलो ब्लकहरू खनन गर्न काम गरिरहेका थिए, जो कोहीले पनि आफ्नो व्यक्तिगत कम्प्युटरमा Bitcoin माइनिङ सफ्टवेयर चलाएर 50 BTC कमाउन सक्थे। मुद्राले लोकप्रियता हासिल गर्न थालेपछि, चतुर खानीहरूले एकभन्दा बढी कम्प्यूटर खानीमा काम गरेको खण्डमा उनीहरूले धेरै कमाउन सक्छन् भनी महसुस गरे।
बिटकोइनको मूल्य बढ्दै गएपछि, सम्पूर्ण कम्पनीहरू मेरो लागि वसन्त हुन थाले। यी कम्पनीहरूले विशेष चिपहरू ("ASICs") विकास गरे र Bitcoin खनन गर्न यी ASIC चिपहरू प्रयोग गरेर सर्भरहरूको विशाल फार्महरू निर्माण गरे। यी ठूला खनन निगमहरूको उदयले Bitcoin गोल्ड रशलाई चलायो, ​​जसले दैनिक मानिसहरूलाई नेटवर्कमा योगदान गर्न र पुरस्कृत गर्न धेरै गाह्रो बनायो। तिनीहरूको प्रयासले संसारभरि बढ्दो वातावरणीय समस्याहरूमा योगदान गर्दै, कम्प्युटिङ ऊर्जाको बढ्दो मात्रामा खपत गर्न थाल्यो।
Bitcoin माइनिङको सहजता र Bitcoin खनन फार्महरूको पछिको वृद्धिले Bitcoin नेटवर्कमा उत्पादन शक्ति र सम्पत्तिको ठूलो केन्द्रीकरण तुरुन्तै उत्पादन गर्यो। केही सन्दर्भ प्रदान गर्न, सबै बिटकोइनहरूको 87% अब तिनीहरूको नेटवर्कको 1% स्वामित्वमा छन्, यी मध्ये धेरै सिक्काहरू उनीहरूको प्रारम्भिक दिनहरूमा वस्तुतः नि:शुल्क खनिएका थिए। अर्को उदाहरणको रूपमा, Bitmain, Bitcoin को सबैभन्दा ठूलो खनन कार्यहरू मध्ये एक कमाएको छकरोडौं राजस्व र नाफा.
बिटकोइनको नेटवर्कमा शक्तिको केन्द्रीकरणले औसत व्यक्तिको लागि धेरै गाह्रो र महँगो बनाउँछ। यदि तपाइँ Bitcoin प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँको सबैभन्दा सजिलो विकल्पहरू निम्न हुन्:
मेरो यो आफैलाई। केवल विशेष हार्डवेयर हुक गर्नुहोस् (यहाँ छAmazon मा एक रिग, यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने!) र शहरमा जानुहोस्। भर्खर थाहा छ कि तपाई विश्वभरका ठूला सर्भर फार्महरू विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नुहुनेछ, स्विट्जरल्याण्डको देश जत्तिकै ऊर्जा खपत गर्दै, तपाईले धेरै खान सक्षम हुनुहुने छैन।
एक विनिमय मा Bitcoin किन्नुहोस्। आज, तपाईले Bitcoin लेख्ने समयमा $ 3,500 / सिक्काको एकाई मूल्यमा किन्न सक्नुहुन्छ (नोट: तपाईले बिटकोइनको आंशिक मात्रा किन्न सक्नुहुन्छ!) अवश्य पनि, तपाईले बिटकोइनको मूल्यको रूपमा त्यसो गर्दा पर्याप्त जोखिम पनि लिइरहनुभएको छ। एकदम अस्थिर छ।
क्रिप्टोकरन्सीले हालको वित्तीय मोडेललाई कसरी बाधा पुर्‍याउन सक्छ भनेर देखाउने पहिलो व्यक्ति बिटक्वाइन थियो, जसले मानिसहरूलाई तेस्रो पक्ष बिना नै लेनदेन गर्न सक्ने क्षमता दिन्छ। स्वतन्त्रता, लचिलोपन र गोपनीयतामा भएको बृद्धिले नयाँ मानकको रूपमा डिजिटल मुद्राहरू तर्फ अपरिहार्य मार्च ड्राइभ गर्न जारी राख्छ। यसको फाइदाहरूको बावजुद, बिटकोइनको (सम्भवतः अनपेक्षित) पैसा र शक्तिको एकाग्रताले मुख्यधारा अपनाउनको लागि अर्थपूर्ण बाधा प्रस्तुत गर्दछ। Pi को कोर टोलीले किन मानिसहरू क्रिप्टोकरेन्सी स्पेसमा प्रवेश गर्न अनिच्छुक छन् भन्ने कुरा बुझ्नको लागि अनुसन्धान सञ्चालन गरेको छ। मानिसहरूले लगातार लगानी/खननको जोखिमलाई प्रवेशमा प्रमुख बाधाको रूपमा उद्धृत गरे।
समाधान: Pi - मोबाइल फोनमा खनन सक्षम गर्दै
ग्रहण गर्नका लागि यी प्रमुख अवरोधहरू पहिचान गरेपछि, Pi कोर टोलीले दैनिक मानिसहरूलाई खानी (वा लेनदेनको वितरित रेकर्डमा लेनदेनहरू मान्य गर्न क्रिप्टोकरेन्सी पुरस्कारहरू कमाउन) अनुमति दिने तरिका खोज्न निस्क्यो। रिफ्रेसरको रूपमा, लेनदेनको वितरित रेकर्ड कायम राख्ने प्रमुख चुनौतीहरू मध्ये एउटा यो खुला रेकर्डमा अद्यावधिकहरू धोखाधडी नभएको सुनिश्चित गर्नु हो। Bitcoin को रेकर्ड अद्यावधिक गर्न को लागी प्रक्रिया प्रमाणित भएको छ (विश्वसनीयता प्रमाणित गर्न ऊर्जा / पैसा जलाउने), यो धेरै प्रयोगकर्ता (वा ग्रह!) अनुकूल छैन। Pi को लागि, हामीले एक सहमति एल्गोरिदम प्रयोग गर्ने अतिरिक्त डिजाइन आवश्यकता प्रस्तुत गर्‍यौं जुन अत्यन्त प्रयोगकर्ता मैत्री र व्यक्तिगत कम्प्युटर र मोबाइल फोनहरूमा खनन सक्षम गर्ने आदर्श हुनेछ।
अवस्थित सहमति एल्गोरिदमहरू (एक वितरित खातामा लेनदेन रेकर्ड गर्ने प्रक्रिया) तुलना गर्दा, तारकीय सहमति प्रोटोकल प्रयोगकर्ता-अनुकूल, मोबाइल-पहिलो खनन सक्षम गर्न अग्रणी उम्मेद्वारको रूपमा उभिएको छ।तारकीय सहमति प्रोटोकल(SCP) स्ट्यानफोर्डमा कम्प्यूटर विज्ञानका प्रोफेसर डेभिड माजिएरेस द्वारा वास्तु बनाइएको थियो जसले मुख्य वैज्ञानिकको रूपमा पनि सेवा गर्दछ।तारकीय विकास फाउन्डेसन। वितरण गरिएको खातामा अद्यावधिकहरू सही र विश्वसनीय छन् भनी सुनिश्चित गर्न SCP ले Federated Byzantine Agreements भनिने नयाँ संयन्त्र प्रयोग गर्दछ। SCP लाई स्टेलर ब्लकचेन मार्फत अभ्यासमा पनि तैनाथ गरिएको छ जुन देखि सञ्चालन भइरहेको छ2015.
सहमति एल्गोरिदम को एक सरल परिचय
Pi कन्सेन्सस एल्गोरिथ्मको परिचय दिन अघि, यसले ब्लकचेनका लागि कन्सेन्सस एल्गोरिदमले के गर्छ र आजको ब्लकचेन प्रोटोकलहरूले सामान्यतया प्रयोग गर्ने सहमति एल्गोरिदमका प्रकारहरू, जस्तै बिटकोइन र एससीपी बारे सरल व्याख्या गर्न मद्दत गर्दछ। यो खण्ड स्पष्टता को खातिर एक oversimplified तरिकामा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ, र पूर्ण छैन। उच्च शुद्धताको लागि, खण्ड हेर्नुहोस्SCP मा अनुकूलनतल र तारकीय सहमति प्रोटोकल पेपर पढ्नुहोस्।
ब्लकचेन एक दोष-सहिष्णु वितरण प्रणाली हो जसले लेनदेनको ब्लकहरूको सूचीलाई पूर्ण रूपमा अर्डर गर्ने लक्ष्य राख्छ। दोष-सहिष्णु वितरण प्रणालीहरू कम्प्युटर विज्ञानको एक क्षेत्र हो जुन धेरै दशकहरूको लागि अध्ययन गरिएको छ। तिनीहरूलाई वितरण प्रणाली भनिन्छ किनभने तिनीहरूसँग केन्द्रीकृत सर्भर छैन तर यसको सट्टा तिनीहरू कम्प्युटरहरूको विकेन्द्रीकृत सूचीबाट बनेका छन् (जसलाई भनिन्छ।नोडहरूवासाथीहरुसामग्री र ब्लकहरूको कुल क्रम के हो भनेर सहमतिमा आउन आवश्यक छ। तिनीहरूलाई दोष-सहिष्णु पनि भनिन्छ किनभने तिनीहरू प्रणालीमा त्रुटिपूर्ण नोडहरूको निश्चित डिग्री सहन सक्छन् (जस्तै 33% सम्म नोडहरू दोषपूर्ण हुन सक्छन् र समग्र प्रणाली सामान्य रूपमा काम गर्न जारी रहन्छ)।
सहमति एल्गोरिदमका दुईवटा व्यापक वर्गहरू छन्: अर्को ब्लक उत्पादन गर्ने नेताको रूपमा नोड चयन गर्नेहरू, र जहाँ कुनै स्पष्ट नेता छैन तर सबै नोडहरू भोटहरू आदानप्रदान गरेपछि अर्को ब्लक के हो भन्ने सहमतिमा आउँछन्। एकअर्कालाई कम्प्युटर सन्देशहरू पठाउँदै। (अन्तिम वाक्यमा कडाईका साथ बोल्दा धेरै अशुद्धताहरू छन्, तर यसले हामीलाई व्यापक स्ट्रोकहरू व्याख्या गर्न मद्दत गर्दछ।)
बिटकोइनले पहिलो प्रकारको सहमति एल्गोरिथ्म प्रयोग गर्दछ: सबै बिटकोइन नोडहरू क्रिप्टोग्राफिक पजल समाधान गर्न एकअर्का विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। किनभने समाधान अनियमित रूपमा फेला परेको छ, अनिवार्य रूपमा नोड जसले पहिले समाधान फेला पार्छ, संयोगले, अर्को ब्लक उत्पादन गर्ने राउन्डको नेता चुनिन्छ। यस एल्गोरिदमलाई "प्रुफ अफ वर्क" भनिन्छ र यसले धेरै ऊर्जा खपत गर्छ।
स्टेलर कन्सेन्सस प्रोटोकलको सरलीकृत परिचय
Pi ले अन्य प्रकारको कन्सेन्सस एल्गोरिदमहरू प्रयोग गर्दछ र स्टेलर कन्सेन्सस प्रोटोकल (SCP) र Federated Byzantine Agreement (FBA) भनिने एल्गोरिदममा आधारित छ। त्यस्ता एल्गोरिदमहरूमा ऊर्जाको अपशिष्ट हुँदैन तर नोडहरू अर्को ब्लक के हुनुपर्छ भन्नेमा "सहमति" मा आउनको लागि तिनीहरूलाई धेरै नेटवर्क सन्देशहरू आदानप्रदान गर्न आवश्यक छ। प्रत्येक नोडले लेनदेन मान्य छ वा छैन भनेर स्वतन्त्र रूपमा निर्धारण गर्न सक्छ, जस्तै क्रिप्टोग्राफिक हस्ताक्षर र लेनदेन इतिहासको आधारमा संक्रमण र दोहोरो खर्च गर्ने अधिकार। यद्यपि, कम्प्यूटरको नेटवर्कको लागि ब्लकमा कुन लेनदेनहरू रेकर्ड गर्ने र यी लेनदेन र ब्लकहरूको क्रममा सहमत हुनको लागि, तिनीहरूले एकअर्कालाई सन्देश दिन आवश्यक छ र सहमतिमा आउन मतदानको धेरै राउन्डहरू हुनुपर्छ। सहज रूपमा, कुन ब्लक अर्को हो भन्ने बारे नेटवर्कमा विभिन्न कम्प्युटरहरूबाट त्यस्ता सन्देशहरू निम्न जस्तो देखिन्छन्: "मप्रस्तावहामी सबैले ब्लक A लाई अर्को हुनको लागि भोट गर्छौं"; "मभोटब्लक A अर्को ब्लक हुनको लागि"; "मपुष्टि गर्नुहोस्मलाई विश्वास गर्ने अधिकांश नोडहरूले पनि ब्लक A" लाई मतदान गरे, जसबाट सहमति एल्गोरिदमले यो नोडलाई "A अर्को ब्लक हो" भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्षम बनाउँछ; र अर्को ब्लकको रूपमा A बाहेक अरू कुनै ब्लक हुन सक्दैन"; यद्यपि माथिको मतदान चरणहरू धेरै देखिन्छन्, इन्टरनेट पर्याप्त रूपमा छिटो छ र यी सन्देशहरू हल्का छन्, यसैले त्यस्ता सहमति एल्गोरिदमहरू Bitcoin को कामको प्रमाण भन्दा धेरै हल्का छन्। त्यस्ता एल्गोरिदमहरूको एक प्रमुख प्रतिनिधिलाई बाइजान्टिन फल्ट टोलरेन्स (BFT) भनिन्छ। आज धेरै शीर्ष ब्लकचेनहरू BFT को भिन्नताहरूमा आधारित छन्, जस्तै NEO र Ripple।
BFT को एक प्रमुख आलोचना यो हो कि यसको एक केन्द्रीकरण बिन्दु छ: किनभने मतदान समावेश छ, मतदान "कोरम" मा भाग लिने नोडहरूको सेट यसको सुरुमा प्रणालीको सिर्जनाकर्ता द्वारा केन्द्रित रूपमा निर्धारण गरिन्छ। FBA को योगदान यो हो कि, एक केन्द्रीय रूपमा निर्धारित कोरम हुनुको सट्टा, प्रत्येक नोडले आफ्नै "कोरम स्लाइसहरू" सेट गर्दछ, जसले बदलीमा विभिन्न गणपूरकहरू बनाउँदछ। नयाँ नोडहरू विकेन्द्रीकृत तरिकाले नेटवर्कमा सामेल हुन सक्छन्: उनीहरूले विश्वास गर्ने नोडहरू घोषणा गर्छन् र अन्य नोडहरूलाई उनीहरूलाई विश्वास गर्न मनाउँछन्, तर उनीहरूले कुनै पनि केन्द्रीय अधिकारीलाई मनाउन आवश्यक पर्दैन।
SCP FBA को एक संस्था हो। Bitcoin को कार्य सहमति एल्गोरिथ्मको प्रमाणमा जस्तै उर्जा जलाउनुको सट्टा, SCP नोडहरूले नेटवर्कमा अन्य नोडहरू विश्वासयोग्यको रूपमा भाउच गरेर साझा रेकर्ड सुरक्षित गर्दछ। नेटवर्कमा प्रत्येक नोडले कोरम स्लाइस बनाउँछ, नेटवर्कमा अन्य नोडहरू समावेश गर्दछ जुन उनीहरूले विश्वासयोग्य ठान्छन्। कोरमहरू यसका सदस्यहरूको कोरम स्लाइसहरूको आधारमा बनाइन्छ, र प्रमाणिकरणकर्ताले नयाँ लेनदेनहरू मात्र स्वीकार गर्नेछ यदि तिनीहरूको कोरममा नोडहरूको अनुपातले पनि लेनदेन स्वीकार गर्नेछ। सञ्जालभरका मान्यकर्ताहरूले आफ्नो कोरमहरू निर्माण गर्दा, यी कोरमहरूले सुरक्षाको ग्यारेन्टीको साथ लेनदेनको बारेमा सहमतिमा पुग्न नोडहरूलाई मद्दत गर्छन्। तपाईंले यो जाँच गरेर तारकीय सहमति प्रोटोकल बारे थप जान्न सक्नुहुन्छSCP को प्राविधिक सारांश.
स्टेलर कन्सेन्सस प्रोटोकल (SCP) मा Pi को अनुकूलन
Pi को सहमति एल्गोरिदम SCP मा बनाउँछ। SCP औपचारिक रूपमा प्रमाणित भएको छ [ ]Mazieres 2015] र हाल स्टेलर नेटवर्क भित्र लागू गरिएको छ। नोडको रूपमा प्रायः कम्पनीहरू र संस्थाहरू (जस्तै, IBM) समावेश भएको स्टेलर नेटवर्कको विपरीत, Pi ले व्यक्तिहरूको यन्त्रहरूलाई प्रोटोकल स्तरमा योगदान गर्न र मोबाइल फोन, ल्यापटप र कम्प्युटरहरू सहित पुरस्कृत गर्न अनुमति दिन चाहन्छ। तल एक परिचय छ कसरी Pi ले व्यक्तिहरूद्वारा खनन सक्षम गर्न SCP लागू गर्छ।
Pi माइनरहरूको रूपमा Pi प्रयोगकर्ताहरूले खेल्न सक्ने चार भूमिकाहरू छन्। अर्थात्:
अग्रगामी। Pi मोबाइल एपको प्रयोगकर्ता जसले दैनिक आधारमा "रोबोट" होइन भनेर पुष्टि गर्दैछ। यो प्रयोगकर्ताले एपमा साइन इन गर्दा हरेक पटक आफ्नो उपस्थिति प्रमाणित गर्छ। तिनीहरूले लेनदेन अनुरोध गर्न एप पनि खोल्न सक्छन् (जस्तै अर्को पायनियरलाई Pi मा भुक्तानी गर्नुहोस्)
योगदानकर्ता। Pi मोबाइल एपको प्रयोगकर्ता जसले आफूलाई चिनेका र विश्वास गर्ने अग्रगामीहरूको सूची उपलब्ध गराएर योगदान दिइरहेका छन्। समग्रमा, Pi योगदानकर्ताहरूले विश्वव्यापी विश्वास ग्राफ निर्माण गर्नेछन्।
राजदूत। Pi नेटवर्कमा अन्य प्रयोगकर्ताहरू परिचय गराउने Pi मोबाइल एपको प्रयोगकर्ता।
नोड। एक प्रयोगकर्ता जो अग्रगामी हो, Pi मोबाइल एप प्रयोग गरेर योगदानकर्ता हो, र आफ्नो डेस्कटप वा ल्यापटप कम्प्युटरमा Pi नोड सफ्टवेयर पनि चलिरहेको छ। Pi नोड सफ्टवेयर एक सफ्टवेयर हो जसले योगदानकर्ताहरूले प्रदान गरेको विश्वास ग्राफ जानकारीलाई ध्यानमा राख्दै कोर SCP एल्गोरिदम चलाउँछ।
एक प्रयोगकर्ताले माथिको भूमिका मध्ये एक भन्दा बढी खेल्न सक्छ। सबै भूमिकाहरू आवश्यक छन्, यसरी सबै भूमिकाहरूलाई दैनिक आधारमा भर्खरै भर्खरै गरिएको Pi द्वारा पुरस्कृत गरिन्छ जबसम्म उनीहरूले त्यो दिनमा भाग लिए र योगदान गरे। योगदानको लागि इनामको रूपमा भर्खरै टकसाल गरिएको मुद्रा प्राप्त गर्ने प्रयोगकर्ताको रूपमा "खनिक" को ढीलो परिभाषामा, सबै चार भूमिकाहरूलाई Pi माइनरहरू मानिन्छ। हामीले Bitcoin वा Ethereum मा जस्तै कार्य सहमति एल्गोरिथ्मको प्रमाण कार्यान्वयन गर्न बराबर यसको परम्परागत अर्थ भन्दा व्यापक रूपमा "खनन" लाई परिभाषित गर्छौं।
सबै भन्दा पहिले, हामीले जोड दिनु पर्छ कि Pi नोड सफ्टवेयर अझै जारी गरिएको छैन। त्यसैले यो खण्ड वास्तुकला डिजाइनको रूपमा र प्राविधिक समुदायबाट टिप्पणीहरू माग्ने अनुरोधको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ। यो सफ्टवेयर पूर्ण रूपमा खुला स्रोत हुनेछ र यो पनि ठूलो रूपमा स्टेलर-कोरमा निर्भर हुनेछ जुन खुला स्रोत सफ्टवेयर पनि हो, उपलब्ध छ।यहाँ। यसको मतलब यो हो कि समुदायमा जो कोहीले यसलाई पढ्न, टिप्पणी गर्न र सुधारहरू प्रस्ताव गर्न सक्षम हुनेछन्। तल व्यक्तिगत यन्त्रहरूद्वारा खनन सक्षम गर्न SCP मा Pi प्रस्तावित परिवर्तनहरू छन्।
पठनीयताको लागि, हामीaको रूपमा परिभाषित गर्छौंसही रूपमा जोडिएको नोडएससीपी पेपरले के भनेर बुझाउँछअक्षुण्ण नोड। साथै, पठनीयताको लागि, हामी को रूपमा परिभाषित गर्दछौंमुख्य Pi नेटवर्कPi नेटवर्कमा सबै अक्षुण्ण नोडहरूको सेट हुन। प्रत्येक नोडको मुख्य कार्य मुख्य Pi नेटवर्कमा सही रूपमा जडान हुन कन्फिगर गर्नु हो। सहज रूपमा, मुख्य नेटवर्कमा गलत रूपमा जडान भएको नोड मुख्य बिटकोइन नेटवर्कमा जडान नभएको बिटकोइन नोड जस्तै हो।
SCP को सर्तहरूमा, नोडलाई सही रूपमा जडान गर्नको लागि यो नोडले "कोरम स्लाइस" छनोट गर्नुपर्छ जसमा यो नोड समावेश हुने सबै परिणामात्मक कोरमहरू अवस्थित नेटवर्कको कोरमहरूसँग मिल्छ। अधिक स्पष्ट रूपमा, एक नोड vn+1ठीकसँग जडान गरिएको मुख्य नेटवर्क N को n पहिले नै सही रूपमा जडान गरिएको नोडहरू (v1, वि2, …, विn) यदि n+1 नोडहरूको नतिजा प्रणाली N' (v1, वि2, …, विn+1) कोरम प्रतिच्छेदन प्राप्त गर्दछ। अर्को शब्दमा, N' ले कोरम प्रतिच्छेदनको मजा लिन्छ यदि यसको कुनै दुई कोरमले नोड साझा गर्दछ। - अर्थात्, सबै गणपूरकहरूको लागि U1अनि तिमी2, यू1∩U2≠ ∅।
अवस्थित स्टेलर कन्सेन्सस डिप्लोइमेन्टमा Pi को मुख्य योगदान भनेको यो हो कि यसले Pi योगदानकर्ताहरूद्वारा प्रदान गरिएको ट्रस्ट ग्राफको अवधारणालाई जानकारीको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ जुन Pi नोडहरूले मुख्य Pi नेटवर्कमा जडान गर्न तिनीहरूको कन्फिगरेसनहरू सेटअप गर्दा प्रयोग गर्न सकिन्छ। ।
तिनीहरूको कोरम स्लाइसहरू छनोट गर्दा, यी नोडहरूले योगदानकर्ताहरूले उनीहरूको आफ्नै सुरक्षा सर्कल सहित प्रदान गरेको विश्वास ग्राफलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। यस निर्णयमा सहयोग गर्न, हामी नोडहरू चलाउने प्रयोगकर्ताहरूलाई सकेसम्म सूचित निर्णयहरू गर्न मद्दत गर्न सहायक ग्राफ विश्लेषण सफ्टवेयर उपलब्ध गराउन चाहन्छौं। यो सफ्टवेयरको दैनिक आउटपुट समावेश हुनेछ:
ट्रस्ट ग्राफमा हालको नोडबाट तिनीहरूको दूरी अनुसार क्रमबद्ध गरिएको नोडहरूको सूची; नोड्स को एक श्रेणीबद्ध सूची आधारित aपेजरेङ्कट्रस्ट ग्राफमा नोडहरूको विश्लेषण
कुनै पनि तरिकाले नेटवर्कमा सामेल हुन खोज्ने नयाँ नोडहरूको सूची त्रुटिपूर्ण रूपमा समुदायले रिपोर्ट गरेको नोडहरूको सूची
कुञ्जी शब्द "दुर्व्यवहार Pi nodes" र अन्य सम्बन्धित कुञ्जी शब्दहरूमा वेबबाट सबैभन्दा भर्खरका लेखहरूको सूची; नोडहरूको दृश्य प्रतिनिधित्व जसमा देखाइएको छ जस्तै Pi नेटवर्क समावेश गर्दछStellarBeat कोरम मनिटर[स्रोत कोड]
कोरम एक्सप्लोरर जस्तैQuorumExplorer.com[स्रोत कोड]
एक जस्तै एक सिमुलेशन उपकरणStellarBeat कोरम मनिटरजसले हालको नोडको कन्फिगरेसन परिवर्तन हुँदा Pi नेटवर्कमा यो नोडको जडानमा अपेक्षित परिणामात्मक प्रभावहरू देखाउँछ।
भविष्यको कामको लागि एउटा चाखलाग्दो अनुसन्धान समस्या भनेको एल्गोरिदमहरू विकास गर्नु हो जसले ट्रस्ट ग्राफलाई ध्यानमा राख्न सक्छ र प्रत्येक नोडलाई इष्टतम कन्फिगरेसन सुझाव दिन सक्छ, वा त्यो कन्फिगरेसन स्वतः सेट गर्न सक्छ। Pi नेटवर्कको पहिलो डिप्लोइमेन्टमा, नोडहरू चलाउने प्रयोगकर्ताहरूले कुनै पनि समयमा आफ्नो नोड कन्फिगरेसन अद्यावधिक गर्न सक्छन्, उनीहरूलाई उनीहरूको कन्फिगरेसनहरू दैनिक पुष्टि गर्न प्रेरित गरिनेछ र यदि तिनीहरू उपयुक्त देख्छन् भने तिनीहरूलाई अद्यावधिक गर्न भनिनेछ।
मोबाइल एप प्रयोगकर्ताहरू
जब एक पायोनियरले दिइएको लेनदेन कार्यान्वयन भएको छ भनेर पुष्टि गर्न आवश्यक छ (उदाहरणका लागि तिनीहरूले Pi प्राप्त गरेका छन्) तिनीहरूले मोबाइल एप खोल्छन्। त्यो बिन्दुमा, मोबाइल एप लेजरमा लेनदेन रेकर्ड गरिएको छ वा छैन भनी सोधपुछ गर्न र त्यो ब्लकको सबैभन्दा हालको ब्लक नम्बर र ह्यास मूल्य प्राप्त गर्न एक वा बढी नोडहरूमा जडान गर्दछ। यदि त्यो पायोनियरले पनि नोड चलाउँदैछ भने मोबाइल एपले त्यो पायोनियरको आफ्नै नोडमा जडान गर्दछ। यदि पायोनियरले नोड चलिरहेको छैन भने, एपले धेरै नोडहरूमा जडान गर्दछ र यो जानकारी क्रस गर्नको लागि। अग्रगामीहरूसँग उनीहरूको एपहरू जडान गर्न चाहने नोडहरू चयन गर्ने क्षमता हुनेछ। तर धेरै प्रयोगकर्ताहरूका लागि यसलाई सरल बनाउनको लागि, एपसँग नोडहरूको उचित पूर्वनिर्धारित सेट हुनुपर्छ, जस्तै ट्रस्ट ग्राफमा आधारित प्रयोगकर्ताको सबैभन्दा नजिकका नोडहरू, पेजरेङ्कमा उच्च नोडहरूको अनियमित चयनको साथ। हामी मोबाइल अग्रगामीहरूको लागि नोडहरूको पूर्वनिर्धारित सेट कसरी चयन गर्नुपर्छ भन्ने बारे तपाईंको प्रतिक्रियाको लागि सोध्छौं।
तुलनाको लागि Bitcoin ले प्रत्येक ब्लकमा खनन पुरस्कारहरू आवंटित गर्दछ र यसले कम्प्युटेशनली गहन अनियमित कार्य समाधान गर्न सक्षम हुने भाग्यशाली खानीलाई सबै पुरस्कार दिन्छ। Bitcoin मा यो पुरस्कार हाल 12.5 Bitcoin (~ 40K) प्रत्येक 10 मिनेटमा एक खानीलाई दिइन्छ। यसले कुनै पनि खानी कामदारलाई कहिल्यै पुरस्कार प्राप्त गर्न असम्भव बनाउँछ। यसको समाधानको रूपमा, बिटकोइन खानीहरू केन्द्रीकृत खनन पूलहरूमा व्यवस्थित भइरहेका छन्, जसले सबै प्रशोधन शक्तिमा योगदान गर्दछ, पुरस्कारहरू प्राप्त गर्ने सम्भावना बढाउँछ, र अन्ततः ती पुरस्कारहरू समानुपातिक रूपमा साझेदारी गर्दछ। खानी पोखरीहरू केन्द्रीकरणको बिन्दु मात्र होइनन्, तर तिनीहरूका सञ्चालकहरूले व्यक्तिगत खानीहरूमा जाने रकम घटाएर कटौती पनि पाउँछन्। Pi मा, खनन पोखरीहरू आवश्यक पर्दैन, किनकि दिनमा एक पटक योगदान गर्ने सबैले नयाँ Pi को मेरिटोक्रेटिक वितरण पाउँछन्।
Bitcoin लेनदेन जस्तै, शुल्क Pi नेटवर्क मा वैकल्पिक छन्। प्रत्येक ब्लकमा कति लेनदेनहरू समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने निश्चित सीमा हुन्छ। जब त्यहाँ लेनदेनको ब्याकलग छैन, लेनदेनहरू नि: शुल्क हुन्छन्। तर यदि त्यहाँ धेरै लेनदेनहरू छन् भने, नोडहरूले तिनीहरूलाई शुल्क अनुसार अर्डर गर्दछ, शीर्षमा उच्चतम-शुल्क-लेनदेनहरू र उत्पादित ब्लकहरूमा समावेश गर्नका लागि केवल शीर्ष लेनदेनहरू छान्नुहोस्। यसले यसलाई खुला बजार बनाउँछ। कार्यान्वयन: शुल्कहरू दिनमा एक पटक नोडहरू बीच समानुपातिक रूपमा विभाजित हुन्छन्। प्रत्येक ब्लकमा, प्रत्येक लेनदेनको शुल्क अस्थायी वालेटमा स्थानान्तरण गरिन्छ जहाँबाट दिनको अन्त्यमा दिनका सक्रिय खानीहरूलाई वितरण गरिन्छ। यो वालेटमा अज्ञात निजी साँचो छ। त्यो वालेट भित्र र बाहिर लेनदेनहरू प्रोटोकलद्वारा सबै नोडहरूको सहमतिमा बाध्य हुन्छन् जसरी सहमतिले पनि हरेक दिन नयाँ Pi मिन्ट गर्छ।
सीमितता र भविष्यको काम
जबकि SCP को स्केलेबिलिटी अझै एक खुला अनुसन्धान समस्या हो। त्यहाँ धेरै आशाजनक तरिकाहरू छन् जसले चीजहरूलाई गति दिन सक्छ। एउटा सम्भावित स्केलेबिलिटी समाधान होbloXroute। BloXroute ले ब्लकचेन वितरण नेटवर्क (BDN) प्रस्ताव गर्दछ जसले नेटवर्क प्रदर्शनको लागि अनुकूलित सर्भरहरूको विश्वव्यापी नेटवर्क प्रयोग गर्दछ। जबकि प्रत्येक BDN केन्द्रिय रूपमा एक संगठन द्वारा नियन्त्रित छ, तिनीहरूले एक स्पष्ट तटस्थ सन्देश पासिंग एक्सेलेरेशन प्रस्ताव गर्दछ। अर्थात् BDN ले सन्देशहरू इन्क्रिप्टेड भएकाले भेदभाव बिना नै सबै नोडहरू निष्पक्ष रूपमा सेवा गर्न सक्छन्। यसको मतलब BDN लाई सन्देशहरू कहाँबाट आउँछन्, तिनीहरू कहाँ जान्छन्, वा भित्र के छ भनेर थाहा छैन। यस तरिकाले Pi नोडहरूमा दुईवटा सन्देश पठाउने मार्गहरू हुन सक्छन्: BDN मार्फत छिटो, जुन धेरैजसो समय भरपर्दो हुने अपेक्षा गरिन्छ, र यसको मूल पियर-टू-पियर सन्देश पास गर्ने इन्टरफेस जुन पूर्ण रूपमा विकेन्द्रीकृत र भरपर्दो छ तर ढिलो छ। यस विचारको अन्तर्दृष्टि क्यासिंगसँग अस्पष्ट रूपमा मिल्दोजुल्दो छ: क्यास भनेको स्थान हो जहाँ कम्प्युटरले धेरै छिटो डेटा पहुँच गर्न सक्छ, औसत गणनाको गति, तर यो सधैं आवश्यक जानकारीको प्रत्येक टुक्रा हुने ग्यारेन्टी छैन। जब क्यास छुटेको छ, कम्प्यूटर ढिलो हुन्छ तर कुनै पनि विनाशकारी हुँदैन। अर्को समाधान खुल्ला पियर-टू-पियर नेटवर्कहरूमा मल्टीकास्ट सन्देशहरूको सुरक्षित स्वीकृति प्रयोग गर्न सकिन्छ।निकोलोसी र माजिएरेस 2004] साथीहरू बीच सन्देश प्रचार को गति।
पहिलो पुस्ताको आर्थिक मोडेलका फाइदा र बेफाइदाहरू
Bitcoin को सबैभन्दा प्रभावशाली आविष्कारहरू मध्ये एक आर्थिक खेल सिद्धान्त संग वितरण प्रणाली को विवाह हो।
Bitcoin को आर्थिक मोडेल सरल छ।त्यहाँ केवल 21 मिलियन बिटकोइन अस्तित्वमा हुनेछ। यो नम्बर कोडमा सेट गरिएको छ। संसारभरि 7.5B मानिसहरू बीच मात्र 21M प्रसारित गर्न को लागी, त्यहाँ वरिपरि जान पर्याप्त Bitcoin छैन। यो अभाव बिटकोइनको मूल्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चालकहरू मध्ये एक हो।
घट्दै ब्लक इनाम
Bitcoin' वितरण योजना, तल चित्रित, यो अभाव को भावना थप लागू गर्दछ। Bitcoin ब्लक खनन पुरस्कार हरेक 210,000 ब्लक (लगभग हरेक ~4वर्ष।) को शुरुवाती दिनहरूमा, Bitcoin ब्लक इनाम 50 सिक्का थियो। अब, पुरस्कार 12.5 छ, र मे 2020 मा 6.25 सिक्कामा थप घट्नेछ। बिटकोइनको वितरण दर घट्नुको अर्थ, मुद्राको चेतना बढ्दै जाँदा, वास्तवमा मेरो लागि कम छ।
उल्टो मतलब असमान
Bitcoin को उल्टो वितरण मोडेल (सुरुमा धेरै कमाउने कम मानिसहरू, र अधिक मानिसहरूले आज कम कमाउँछन्) यसको असमान वितरणको लागि प्राथमिक योगदानकर्ताहरू मध्ये एक हो। केही प्रारम्भिक ग्रहणकर्ताहरूको हातमा यति धेरै बिटकोइनको साथ, नयाँ खानीहरूले कम बिटक्वाइनको लागि थप ऊर्जा "जलाउँदै" छन्।
होर्डिङले विनिमयको माध्यमको रूपमा प्रयोगलाई रोक्छ
यद्यपि बिटकोइनलाई "पियर टु पियर इलेक्ट्रोनिक नगद" प्रणालीको रूपमा जारी गरिएको थियो, बिटकोइनको सापेक्ष अभावले बिटकोइनको माध्यम विनिमयको रूपमा सेवा गर्ने लक्ष्यमा बाधा पुर्‍याएको छ। बिटकोइनको अभावले यसलाई "डिजिटल सुन" वा मूल्यको डिजिटल भण्डारको रूपमा बुझेको छ। यस धारणाको नतिजा यो हो कि धेरै बिटकोइन धारकहरू दिन-प्रतिदिन खर्चहरूमा बिटकोइन खर्च गर्न इच्छुक छैनन्।
Pi आर्थिक मोडेल
Pi, अर्कोतर्फ, Pi को लागि अभावको भावना सिर्जना गर्ने बीचमा सन्तुलन कायम गर्न खोज्छ, जबकि अझै पनि यो सुनिश्चित गर्दै कि ठूलो रकम धेरै सानो हातमा जम्मा हुँदैन। हामी सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं कि हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूले नेटवर्कमा योगदान पुर्‍याएर थप Pi कमाउँछन्। Pi को लक्ष्य एक आर्थिक मोडेल निर्माण गर्नु हो जुन यी प्राथमिकताहरू प्राप्त गर्न र सन्तुलन गर्न पर्याप्त परिष्कृत छ र मानिसहरूले प्रयोग गर्न पर्याप्त सहज रहन्छ।
Pi को आर्थिक मोडेल डिजाइन आवश्यकताहरु:
सरल: एक सहज र पारदर्शी मोडेल निर्माण गर्नुहोस्
निष्पक्ष वितरण: विश्वको जनसङ्ख्याको महत्वपूर्ण समूहलाई Pi मा पहुँच दिनुहोस्
अभाव: समयसँगै Pi को मूल्य कायम राख्न अभावको भावना सिर्जना गर्नुहोस्
मेरिटोक्रेटिक कमाई: सञ्जाल निर्माण र दिगो बनाउन योगदानहरू पुरस्कृत गर्नुहोस्
Pi - टोकन आपूर्ति
टोकन उत्सर्जन नीति
कुल अधिकतम आपूर्ति = M + R + D
M = कुल खनन पुरस्कार
R = कुल रेफरल पुरस्कार
D = कुल विकासकर्ता पुरस्कार
M = ∫ f(P) dx जहाँfलघुगणकीय रूपमा घट्ने प्रकार्य हो
P = जनसंख्या संख्या (जस्तै, सामेल हुन पहिलो व्यक्ति, सामेल हुन दोस्रो व्यक्ति, आदि)
आर = आर * एम
r = रेफरल दर (50% कुल वा 25% रेफरर र रेफरीको लागि)
t = विकासकर्ता पुरस्कार दर (25%)
M - खनन आपूर्ति (प्रति व्यक्ति मिन्ट गरिएको निश्चित खनन आपूर्तिमा आधारित)
Bitcoin को विपरीत जसले सम्पूर्ण विश्वव्यापी जनसंख्याको लागि सिक्काको एक निश्चित आपूर्ति सिर्जना गर्यो, Pi ले Pi को एक निश्चित आपूर्ति सिर्जना गर्दछ।पहिलो 100 मिलियन सहभागीहरू सम्म नेटवर्कमा सामेल हुने प्रत्येक व्यक्तिको लागि।अर्को शब्दमा, Pi नेटवर्कमा सामेल हुने प्रत्येक व्यक्तिको लागि, Pi को एक निश्चित मात्रा पूर्व-मिन्ट गरिएको छ। यो आपूर्ति त्यसपछि सदस्यको जीवनकालमा तिनीहरूको संलग्नता र नेटवर्क सुरक्षामा योगदानको आधारमा जारी गरिन्छ। सदस्यको जीवनकालमा बिटकोइनको जस्तै तीव्र रूपमा घट्ने प्रकार्य प्रयोग गरेर आपूर्ति जारी गरिन्छ।
R - रेफरल आपूर्ति (निर्धारित रेफरल पुरस्कार प्रति व्यक्ति र साझा b/w रेफरर र रेफरीको आधारमा)
मुद्राको मूल्य हुनको लागि, यसलाई व्यापक रूपमा वितरण गर्नुपर्छ। यस लक्ष्यलाई प्रोत्साहन गर्न, प्रोटोकलले रेफरर र रेफरी दुवैका लागि रेफरल बोनसको रूपमा काम गर्ने निश्चित मात्रामा Pi पनि उत्पन्न गर्छ (वा अभिभावक र सन्तान दुवै 🙂 यो साझा पोखरी दुवै पक्षहरूले आफ्नो जीवनकालमा उत्खनन गर्न सक्छन् - जब दुवै पक्षहरू सक्रिय रूपमा खनन गरिरहेका छन्। रेफरर र रेफरी दुवैले शोषणकारी मोडेलहरूबाट बच्नको लागि यस पोखरीमा आकर्षित गर्न सक्षम छन् जहाँ रेफररहरूले उनीहरूका रेफरीहरूलाई "शिकार" गर्न सक्षम छन्। रेफरल बोनसले Pi नेटवर्कको विकास गर्न नेटवर्क-स्तर प्रोत्साहनको रूपमा कार्य गर्दछ। सक्रिय रूपमा नेटवर्क सुरक्षित गर्न सदस्यहरू बीच संलग्नता प्रोत्साहन।
D - विकासकर्ता पुरस्कार आपूर्ति (अतिरिक्त Pi minted चलिरहेको विकास समर्थन गर्न)
Pi ले आफ्नो चलिरहेको विकासलाई "विकासकर्ता पुरस्कार" मार्फत कोष दिनेछ जुन प्रत्येक Pi सिक्काको छेउमा खनन र रेफरलहरूको लागि मिन्ट गरिएको छ। परम्परागत रूपमा, क्रिप्टोकरेन्सी प्रोटोकलहरूले तुरुन्तै ट्रेजरीमा राखिएको आपूर्तिको निश्चित मात्रालाई मिन्ट गरेको छ। Pi को कुल आपूर्ति नेटवर्कमा सदस्यहरूको संख्यामा निर्भर भएको हुनाले, Pi ले आफ्नो विकासकर्ताको पुरस्कारलाई नेटवर्क स्केलको रूपमा क्रमशः मिन्ट गर्छ। Pi को विकासकर्ता पुरस्कारको प्रगतिशील minting नेटवर्कको समग्र स्वास्थ्यसँग Pi का योगदानकर्ताहरूको प्रोत्साहनलाई पङ्क्तिबद्ध गर्नको लागि हो।
f एक लघुगणकीय रूपमा घट्ने प्रकार्य हो - प्रारम्भिक सदस्यहरूले बढी कमाउँछन्
जबकि Pi ले धनको चरम सांद्रताबाट बच्न खोज्छ, नेटवर्कले पहिलेका सदस्यहरू र तिनीहरूको योगदानहरूलाई Pi को अपेक्षाकृत ठूलो अंशको साथ पुरस्कृत गर्न खोज्छ। जब Pi जस्ता नेटवर्कहरू तिनीहरूको प्रारम्भिक दिनहरूमा हुन्छन्, तिनीहरूले सहभागीहरूलाई कम उपयोगिता प्रदान गर्न खोज्छन्। उदाहरणका लागि, संसारमा सबैभन्दा पहिलो टेलिफोन भएको कल्पना गर्नुहोस्। यो एक महान प्राविधिक आविष्कार हुनेछ तर धेरै उपयोगी छैन। यद्यपि, धेरै मानिसहरूले टेलिफोनहरू प्राप्त गर्दा, प्रत्येक टेलिफोन धारकले नेटवर्कबाट धेरै उपयोगिता प्राप्त गर्दछ। नेटवर्कमा चाँडै आउने मानिसहरूलाई पुरस्कृत गर्नको लागि, Pi को व्यक्तिगत खनन पुरस्कार र रेफरल पुरस्कारहरू नेटवर्कमा मानिसहरूको संख्याको कार्यको रूपमा घट्छन्। अर्को शब्दमा, त्यहाँ Pi नेटवर्कमा प्रत्येक "स्लट" को लागि आरक्षित Pi को निश्चित मात्रा छ।
उपयोगिता: हाम्रो समय अनलाइन पूलिङ र मुद्रीकरण
आज, सबैजना अप्रयुक्त स्रोतहरूको वास्तविक खजानामा बसिरहेका छन्। हामी प्रत्येकले हाम्रो फोनमा घण्टा दिन बिताउँछौं। हाम्रो फोनमा हुँदा, हाम्रा प्रत्येक हेराइ, पोष्ट वा क्लिकहरूले ठूला निगमहरूको लागि असाधारण नाफा सिर्जना गर्दछ। Pi मा, हामी विश्वास गर्छौं कि मानिसहरूसँग उनीहरूको स्रोतबाट सिर्जना गरिएको मूल्य कब्जा गर्ने अधिकार छ।
हामी सबैलाई थाहा छ कि हामी एक्लै गर्न सक्ने भन्दा धेरै सँगै गर्न सक्छौं। आजको वेबमा, गुगल, अमेजन, फेसबुक जस्ता ठूला कर्पोरेटहरू व्यक्तिगत उपभोक्ताहरू विरुद्ध ठूलो लाभ उठाउँछन्। नतिजाको रूपमा, तिनीहरू वेबमा व्यक्तिगत उपभोक्ताहरू द्वारा सिर्जना गरिएको मूल्यको सिंहशेयर कब्जा गर्न सक्षम छन्। Pi ले आफ्ना सदस्यहरूलाई उनीहरूको सामूहिक स्रोतहरू जम्मा गर्न अनुमति दिएर खेल मैदानलाई स्तर दिन्छ ताकि उनीहरूले सिर्जना गरेको मूल्यको अंश प्राप्त गर्न सकून्।
तलको ग्राफिक Pi स्ट्याक हो, जहाँ हामी हाम्रा सदस्यहरूलाई मूल्य कब्जा गर्न मद्दत गर्ने विशेष अवसरहरू देख्छौं। तल, हामी यी प्रत्येक क्षेत्रमा थप विवरणमा जान्छौं।
पि स्ट्याकको परिचय दिँदै - कम प्रयोग गरिएका स्रोतहरू खोल्दै
Pi लेजर र साझा ट्रस्ट ग्राफ - वेब भर मा स्केलिंग ट्रस्ट
इन्टरनेटमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको कसलाई विश्वास गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनु हो। आज, हामी इन्टरनेटमा कोसँग कारोबार गर्न सक्छौं भनेर जान्नको लागि Amazon, eBay, Yelp जस्ता प्रदायकहरूको मूल्याङ्कन प्रणालीहरूमा भर पर्छौं। हामी, ग्राहकहरू, हाम्रा साथीहरूको मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्ने कडा परिश्रम गर्ने तथ्यको बावजुद, यी इन्टरनेट मध्यस्थहरूले यो काम सिर्जना गरेको मूल्यको सिंहशेयर कब्जा गर्छन्।
Pi को सहमति एल्गोरिदम, माथि वर्णन गरिएको, एक नेटिभ ट्रस्ट लेयर सिर्जना गर्दछ जसले वेबमा बिचौलिया बिना विश्वास मापन गर्दछ। केवल एक व्यक्तिको सुरक्षा सर्कलको मूल्य सानो हुँदा, हाम्रो व्यक्तिगत सुरक्षा सर्कलहरूको समग्रले एक विश्वव्यापी "विश्वास ग्राफ" निर्माण गर्दछ जसले मानिसहरूलाई Pi नेटवर्कमा कसलाई विश्वास गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ। Pi नेटवर्कको ग्लोबल ट्रस्ट ग्राफले अपरिचित व्यक्तिहरू बीचको लेनदेनलाई सहज बनाउनेछ जुन अन्यथा सम्भव हुने थिएन। Pi को मूल मुद्राले सञ्जालको सुरक्षामा योगदान गर्ने सबैलाई उनीहरूले सिर्जना गर्न मद्दत गरेको मूल्यको अंश कब्जा गर्न अनुमति दिन्छ।
पाइको ध्यान बजार - अप्रयुक्त ध्यान र समयको बार्टरिङ
Pi ले आफ्ना सदस्यहरूलाई कुनै पनि व्यक्तिको एक्लै ध्यान भन्दा धेरै मूल्यवान ध्यान बजार सिर्जना गर्न उनीहरूको सामूहिक ध्यान पूल गर्न अनुमति दिन्छ। यस तहमा बनाइएको पहिलो अनुप्रयोगaहुनेछदुर्लभ सामाजिक मिडिया च्यानलहाल अनुप्रयोगको गृह स्क्रिनमा होस्ट गरिएको छ। तपाईं विचार गर्न सक्नुहुन्छदुर्लभ सामाजिक मिडिया च्यानलएक समयमा एक वैश्विक पोस्ट संग Instagram को रूपमा। अग्रगामीहरूले सामग्री (जस्तै, पाठ, छवि, भिडियोहरू) साझेदारी गरेर वा समुदायको सामूहिक बुद्धिमा ट्याप गर्न खोज्ने प्रश्नहरू सोधेर नेटवर्कका अन्य सदस्यहरूको ध्यान आकर्षित गर्न Pi लाई दांव लगाउन सक्छन्। Pi नेटवर्कमा, सबैसँग प्रभावकारी बन्ने वा भीडको बुद्धिमा ट्याप गर्ने अवसर छ। आज सम्म, Pi को कोर टोलीले Pi को डिजाइन छनोटहरूमा समुदायको राय पोल गर्न यो च्यानल प्रयोग गर्दै आएको छ (जस्तै समुदायले Pi लोगोको डिजाइन र रङहरूमा मतदान गरेको छ।) हामीले समुदायबाट धेरै मूल्यवान प्रतिक्रियाहरू र प्रतिक्रियाहरू प्राप्त गरेका छौं। परियोजना। एउटा सम्भावित भविष्यको दिशा भनेको Pi नेटवर्कमा होस्ट गरिएका च्यानलहरूको संख्या विस्तार गर्दै आफ्नो सामग्री पोस्ट गर्न Pi प्रयोग गर्न कुनै पनि अग्रगामीहरूको लागि ध्यान बजार खोल्नु हो।
आफ्ना साथीहरूसँग बार्टरिङको अतिरिक्त, अग्रगामीहरूले उनीहरूको ध्यान खोज्ने कम्पनीहरूसँग बार्टरिङ पनि रोज्न सक्छन्। औसत अमेरिकी बीच देख्छ4,000 र 10,000 विज्ञापन एक दिन। कम्पनीहरू हाम्रो ध्यानको लागि लड्छन् र यसको लागि ठूलो रकम तिर्छन्। तर हामी, ग्राहकहरूले यी लेनदेनहरूबाट कुनै मूल्य प्राप्त गर्दैनौं। Pi को ध्यान बजारमा, Pioneers मा पुग्न खोज्ने कम्पनीहरूले Pi मा आफ्ना दर्शकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। Pi को विज्ञापन मार्केटप्लेस कडाईका साथ मात्र अप्ट-इन हुनेछ र अग्रगामीहरूलाई तिनीहरूको सबैभन्दा ठूलो अप्रयुक्त स्रोतहरू मध्ये एक मुद्रीकरण गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ: तिनीहरूको ध्यान।
Pi को बार्टर मार्केटप्लेस - तपाईको व्यक्तिगत भर्चुअल स्टोरफ्रन्ट बनाउनुहोस्
Pi नेटवर्कमा विश्वास र ध्यान दिनुको अतिरिक्त, हामी अग्रगामीहरूले भविष्यमा आफ्नो अद्वितीय सीप र सेवाहरू योगदान गर्न सक्षम हुने अपेक्षा गर्दछौं। Pi को मोबाइल एपले बिक्रीको बिन्दुको रूपमा पनि काम गर्नेछ जहाँ Pi का सदस्यहरूले Pi नेटवर्कका अन्य सदस्यहरूलाई "भर्चुअल स्टोरफ्रन्ट" मार्फत आफ्ना प्रयोग नगरिएका वस्तुहरू र सेवाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, एक सदस्यले आफ्नो अपार्टमेन्टमा Pi नेटवर्कमा अन्य सदस्यहरूलाई भाडामा प्रयोग नगरिएको कोठा प्रस्ताव गर्छन्। वास्तविक सम्पत्तिहरूको अतिरिक्त, Pi नेटवर्कका सदस्यहरूले उनीहरूको भर्चुअल स्टोरफ्रन्टहरू मार्फत सीप र सेवाहरू प्रस्ताव गर्न सक्षम हुनेछन्। उदाहरणका लागि, Pi नेटवर्कको सदस्यले Pi बजारमा आफ्नो प्रोग्रामिङ वा डिजाइन सीपहरू प्रस्ताव गर्न सक्छ। ओभरटाइम, Pi को मूल्य वस्तु र सेवाहरूको बढ्दो टोकरीद्वारा समर्थित हुनेछ।
Pi को विकेन्द्रीकृत एप स्टोर - सिर्जनाकर्ताहरूको लागि प्रवेशको अवरोध कम गर्दै
Pi नेटवर्कको साझा मुद्रा, विश्वास ग्राफ, र बजार विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगहरूको फराकिलो इकोसिस्टमको लागि माटो हुनेछ। आज, अनुप्रयोग सुरु गर्न चाहने जो कोहीले यसको प्राविधिक पूर्वाधार र समुदायलाई स्क्र्याचबाट बुटस्ट्र्याप गर्न आवश्यक छ। Pi को विकेन्द्रीकृत एप्लिकेसन स्टोरले Dapp विकासकर्ताहरूलाई Pi को अवस्थित पूर्वाधारका साथै समुदाय र प्रयोगकर्ताहरूको साझा स्रोतहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिनेछ। उद्यमी र विकासकर्ताहरूले नेटवर्कको साझा स्रोतहरूमा पहुँचको लागि अनुरोधको साथ समुदायमा नयाँ Dapps प्रस्ताव गर्न सक्छन्। Pi ले यसको Dapps केही हदसम्म अन्तरसञ्चालनशीलताको साथ निर्माण गर्नेछ ताकि Dapps ले अन्य विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगहरूमा डेटा, सम्पत्ति र प्रक्रियाहरू सन्दर्भ गर्न सक्षम हुन्छ।
शासन - जनताको लागि र क्रिप्टोकरेन्सी
1st जेनेरेसन गभर्नेन्स मोडेलहरूका साथ चुनौतीहरू
विश्वास कुनै पनि सफल मौद्रिक प्रणालीको आधार हो। विश्वास पैदा गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारकहरू मध्ये एक होशासन, वा प्रक्रिया जसद्वारा समयसँगै प्रोटोकलमा परिवर्तनहरू लागू हुन्छन्। यसको महत्वको बावजुद, शासन प्रायः मध्ये एक होक्रिप्टोइकोनोमिक प्रणालीका धेरै बेवास्ता गरिएका पक्षहरू.
Bitcoin जस्ता पहिलो पुस्ताका सञ्जालहरूले भूमिका र प्रोत्साहन डिजाइनको संयोजनबाट उत्पन्न हुने अनौपचारिक (वा "अफ-चेन") संयन्त्रहरूको पक्षमा औपचारिक (वा "अन-चेन") शासन संयन्त्रलाई धेरै हदसम्म बेवास्ता गरे। धेरैजसो उपायहरूद्वारा, Bitcoin को शासन संयन्त्रहरू धेरै सफल भएका छन्, जसले प्रोटोकललाई यसको स्थापनादेखि नै मापन र मूल्यमा नाटकीय रूपमा वृद्धि गर्न अनुमति दिएको छ। तर, केही चुनौती पनि देखिएका छन् । Bitcoin को आर्थिक एकाग्रता राजनीतिक शक्ति को एकाग्रता को नेतृत्व गरेको छ। नतिजा यो हो कि दैनिक मानिसहरू बिटकोइनको ठूलो धारकहरू बीच विनाशकारी लडाईहरूको बीचमा फस्न सक्छन्। यो चुनौतीको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरणहरू मध्ये एक चलिरहेको छBitcoin र Bitcoin Cash बीचको युद्ध। यी गृहयुद्धहरू एक काँटामा समाप्त हुन सक्छ जहाँ वा ब्लकचेन। टोकन धारकहरूको लागि, कडा काँटा मुद्रास्फीति हो र तिनीहरूको होल्डिंगको मूल्यलाई धम्की दिन सक्छ।
Pi's Governance Model - दुई चरणको योजना
माअन-चेन शासनको योग्यतालाई चुनौती दिने लेख, Vlad Zamfir, Ethereum को मुख्य विकासकर्ताहरु मध्ये एक, तर्क गर्दछ कि blockchain शासन "अमूर्त डिजाइन समस्या होइन। यो एक लागू सामाजिक समस्या हो।भ्लाडको मुख्य बुँदाहरू मध्ये एउटा यो हो कि शासन प्रणालीलाई "प्राथमिकता" वा विशेष राजनीतिक प्रणालीबाट उत्पन्न हुने विशेष चुनौतिहरूको अवलोकन अघि डिजाइन गर्न धेरै गाह्रो छ। एउटा ऐतिहासिक उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका को स्थापना मा छ। संयुक्त राज्यमा लोकतन्त्रको साथ पहिलो प्रयोग, कन्फेडेरेसनको लेख, आठ वर्षको प्रयोग पछि असफल भयो। संयुक्त राज्यका संस्थापक पिताहरूले संविधान निर्माण गर्न कन्फेडेरेसनको अनुच्छेदका पाठहरू लिन सक्षम भए - धेरै सफल प्रयोग।
स्थायी शासन मोडेल निर्माण गर्न, Pi ले दुई-चरण योजनालाई पछ्याउनेछ।
अस्थायी शासन मोडेल (<5M सदस्यहरू)
नेटवर्कले 5M सदस्यहरूको महत्वपूर्ण जनसङ्ख्यामा नपुग्दासम्म, Pi ले अस्थायी शासन मोडेल अन्तर्गत काम गर्नेछ। यो मोडेल "अफ-चेन" गभर्नेन्स मोडेलहरू जस्तै Bitcoin र Ethereum जस्ता प्रोटोकलहरूद्वारा नियोजित छ, Pi को कोर टोलीले प्रोटोकलको विकासमा मार्गदर्शन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यद्यपि, Pi को कोर टोली अझै पनि समुदायको इनपुटमा धेरै भर पर्नेछ। Pi मोबाइल एप्लिकेसन आफैं हो जहाँ Pi को मुख्य टोलीले सामुदायिक इनपुटको लागि अनुरोध गर्दै आएको छ र अग्रगामीहरूसँग संलग्न छ। Pi ले सामुदायिक आलोचना र सुझावहरूलाई अँगालेको छ, जुन Pi को ल्यान्डिङ पृष्ठ, FAQs र श्वेतपत्रका खुला-का लागि-टिप्पणी सुविधाहरूद्वारा लागू गरिन्छ। जब मानिसहरूले Pi को वेबसाइटहरूमा यी सामग्रीहरू ब्राउज गर्छन्, तिनीहरूले प्रश्नहरू सोध्न र सुझावहरू दिनको लागि त्यहाँ एक विशेष खण्डमा टिप्पणी पेश गर्न सक्छन्। Pi को मुख्य टोलीले आयोजना गरेको अफलाइन पायनियर भेटघाटहरू पनि सामुदायिक इनपुटको लागि महत्त्वपूर्ण च्यानल हुनेछन्।
थप रूपमा, Pi को कोर टोलीले थप औपचारिक शासन मेकानिक्स विकास गर्नेछ। एउटा सम्भावित शासन प्रणाली तरल लोकतन्त्र हो। तरल लोकतन्त्रमा, प्रत्येक अग्रगामीसँग या त कुनै मुद्दामा प्रत्यक्ष रूपमा मतदान गर्ने वा नेटवर्कको अर्को सदस्यलाई आफ्नो मत प्रत्यायोजन गर्ने क्षमता हुन्छ। तरल लोकतन्त्रले पाइको समुदायबाट फराकिलो र प्रभावकारी सदस्यताको लागि अनुमति दिन्छ।
Pi को "संवैधानिक अधिवेशन" (> 5M सदस्यहरू)
5M सदस्यहरूलाई हिट गरेपछि, Pi नेटवर्कमा अघिल्लो योगदानको आधारमा एक अस्थायी समिति गठन गरिनेछ। यो समितिले व्यापक समुदायबाट सुझाव माग्ने र प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवारी लिनेछ। यसले अन-र अफलाइन कुराकानीहरूको श्रृंखला पनि व्यवस्थित गर्नेछ जहाँ Pi का सदस्यहरूले Pi को दीर्घकालीन संविधानमा तौल गर्न सक्षम हुनेछन्। Pi को विश्वव्यापी प्रयोगकर्ता आधारलाई ध्यानमा राख्दै, Pi नेटवर्कले पहुँच सुनिश्चित गर्न विश्वका धेरै स्थानहरूमा यी सम्मेलनहरू सञ्चालन गर्नेछ। व्यक्तिगत सम्मेलनहरू आयोजना गर्नुको अतिरिक्त, Pi ले आफ्नो मोबाइल अनुप्रयोगलाई Pi को सदस्यलाई टाढाबाट प्रक्रियामा भाग लिन अनुमति दिन प्लेटफर्मको रूपमा प्रयोग गर्नेछ। चाहे व्यक्तिगत होस् वा अनलाइन, Pi को समुदायका सदस्यहरूसँग Pi को दीर्घकालीन शासन संरचना निर्माणमा भाग लिने क्षमता हुनेछ।
चरण 1 - डिजाइन, वितरण, ट्रस्ट ग्राफ बुटस्ट्र्याप।
Pi सर्भरले विकेन्द्रीकृत प्रणालीको व्यवहार अनुकरण गर्ने नलको रूपमा काम गरिरहेको छ किनकि यसले एक पटक लाइभ भएपछि काम गर्नेछ। यस चरणको अवधिमा प्रयोगकर्ताको अनुभव र व्यवहारमा सुधारहरू सम्भव छन् र मुख्य नेटको स्थिर चरणको तुलनामा गर्न अपेक्षाकृत सजिलो छ। प्रयोगकर्ताहरूलाई सिक्काको सबै मिन्टिङहरू यो सुरु भएपछि लाइभ नेटमा माइग्रेट गरिनेछ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, livenet ले आफ्नो जेनेसिसमा फेज 1 को समयमा उत्पन्न भएका सबै खाताधारक ब्यालेन्सहरूलाई ब्लक गर्नेछ र हालको प्रणाली जस्तै तर पूर्ण रूपमा विकेन्द्रीकृत रूपमा सञ्चालन जारी राख्नेछ। Pi यस चरणमा एक्सचेन्जहरूमा सूचीबद्ध गरिएको छैन र यो कुनै अन्य मुद्रासँग Pi "किन्न" असम्भव छ।
चरण2- टेस्टनेट
हामीले मुख्य नेट सुरु गर्नु अघि, नोड सफ्टवेयर परीक्षण नेटमा तैनात गरिनेछ। परीक्षण नेटले मुख्य नेटको रूपमा तर परीक्षण Pi सिक्कामा उही सटीक ट्रस्ट ग्राफ प्रयोग गर्नेछ। Pi कोर टोलीले परीक्षण नेटमा धेरै नोडहरू होस्ट गर्नेछ, तर थप अग्रगामीहरूलाई टेस्टनेटमा आफ्नै नोडहरू सुरु गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ। वास्तवमा, कुनै पनि नोड मुख्य नेटमा सामेल हुनको लागि, तिनीहरूलाई testnet मा सुरु गर्न सल्लाह दिइन्छ। परीक्षण नेट पहिलो चरणमा Pi इमुलेटरको समानान्तरमा चलाइनेछ, र आवधिक रूपमा, जस्तै दैनिक, दुवै प्रणालीका नतिजाहरूलाई परीक्षण नेटको ग्याप र मिसहरू समात्न तुलना गरिनेछ, जसले Pi विकासकर्ताहरूलाई प्रस्ताव गर्न र कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिनेछ। फिक्स गर्दछ। दुबै प्रणालीहरूको पूर्ण समवर्ती रन पछि, testnet एउटा राज्यमा पुग्नेछ जहाँ यसको नतिजाहरू लगातार इमुलेटरसँग मेल खान्छ। त्यस समयमा जब समुदायले आफ्नो तयारी महसुस गर्छ, Pi अर्को चरणमा बसाइँ सर्नेछ।
चरण3- मेननेट
जब समुदायले सफ्टवेयर उत्पादनको लागि तयार भएको महसुस गर्छ, र यसलाई टेस्टनेटमा राम्ररी परीक्षण गरिएको छ, Pi नेटवर्कको आधिकारिक मेननेट सुरू गरिनेछ। एउटा महत्त्वपूर्ण विवरण यो हो कि, मेननेटमा ट्रान्जिसनमा, केवल विशिष्ट वास्तविक व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित खाताहरूलाई मात्र सम्मान गरिनेछ। यस बिन्दु पछि, चरण 1 को नल र Pi नेटवर्क इमुलेटर बन्द हुनेछ र प्रणाली सधैंको लागि आफ्नै मा जारी रहनेछ। प्रोटोकलमा भविष्यका अद्यावधिकहरू Pi विकासकर्ता समुदाय र Pi को कोर टोलीद्वारा योगदान गरिनेछ, र समितिद्वारा प्रस्तावित गरिनेछ। तिनीहरूको कार्यान्वयन र तैनाती कुनै पनि अन्य ब्लकचेनहरू जस्तै खनन सफ्टवेयर अपडेट गर्ने नोडहरूमा निर्भर हुनेछ। कुनै पनि केन्द्रीय प्राधिकरणले मुद्रालाई नियन्त्रण गर्ने छैन र यसलाई पूर्ण रूपमा विकेन्द्रीकृत गरिनेछ। नक्कली प्रयोगकर्ता वा डुप्लिकेट प्रयोगकर्ताहरूको ब्यालेन्स खारेज गरिनेछ। यो चरण हो जब Pi लाई एक्सचेन्जहरूमा जडान गर्न सकिन्छ र अन्य मुद्राहरूको लागि साट्न सकिन्छ।
तपाईले मूल pi सेतो कागज फेला पार्न सक्नुहुन्छयहाँ.
Pi सँगै गर्नुहोस्
पाई सिक्कामा ठूलो सम्भावना छ। Pi पहिलो फोन खनन सिक्का हो र प्रयोगकर्ताहरू लाखौं भन्दा बढी छन् र द्रुत रूपमा बढ्दै छन्। Pi नेटवर्कमा विश्व नम्बर 1 प्रयोगकर्ताहरू र क्रिप्टोकरन्सीहरूमा नोडहरू छन्।
मैले Pi जस्तो सिक्का कहिल्यै देखेको छैन जसले सिक्कालाई समान रूपमा वितरण गर्दछ र योजना अनुसार यसको परियोजना विकास गर्दछ। एक पटक 'ओपन मेननेट' माथि र चालू भएपछि, Pi नेटवर्कको उच्च र उच्च मूल्य हुनेछ।
हे पृथ्वीमा साथी।
सँगै Pi गरौं।
Pi नेटवर्क रेफरल कोड
Pi नेटवर्क आधिकारिक जानकारी
Pi नेटवर्क FAQ
अब केही गर